စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 25/01/2021)
သုံးအပန်းဖြေ, Grindelwald, Wengen, နှင့် Murren, အဆိုပါ Jungfrau ဒေသဆိုင်ရာဓာတ်လှေကား pass ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်. ဒါဟာစစ်မှန်တဲ့လာမယ့်ဆောင်းကာလကိုအိပ်မက်ရဲ့!
ရထားနဲ့: သင့်ထံမှနှင်းလျှောစီးရထားသွားလာနိုင်ပါတယ်နေစဉ် ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့စိန့်. Pancras Eurostar နဲ့ Wengen တို့မှာအပြောင်းအလဲတွေအများကြီးရှိတယ်. သင်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူခရီးသွားနေပါလျှင်, ကျနော်တို့ Bern သို့မဟုတ်ဇူးရစ်ဖို့လေယာဉ်လာပြီအကြံပြု. ထိုအရပ်မှ, Interlaken Ost ရန်နှင့်နောက်ပိုင်းတွင် Lauterbrunnen မှ Bern မှတဆင့်တိုက်ရိုက်ရထားဆက်သွယ်မှုယူ. The last bit of the journey is reachable သာရထားလမ်းအားဖြင့် Lauterbrunnen ထံမှ့ကြာ 15 မိနစ်များ.
သငျသညျနှင်းလျှောစီးမှာကြုံတွေ့နေတယ်ဆိုရင်, ထိုအခါ ရထားသွားရောက်အကောင်းဆုံးနှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်း အဆိုပါဖွစျလိမျ့မညျ Sauze d'Oulx ဧရိယာ. ဘယ်အချိန်မှာမိုဃ်းပွင့်ရေတံခွန် သစ်ပင်များကိုအကြားအမှုန့်လယ်ကွင်းတကယ်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သို့ရောက်. ရွာအတွင်းလေထုပျော်စရာနှင့်ကြိုဆိုပွဲနှင့်ဖြစ်ပါသည် တပ်မက်ဘွယ်ကောင်းခြင်း အဟောင်းကို cobbled လမ်းကယ့်ကိုဖြည့်စွက် လှပသောထိ အဆိုပါစွန့်စားမှုရန်.
ထွက်သွား လန်ဒန် 9:30 AM Eurostar တွင်စိန့်ပန့်ကရက်၊ Paris Nord သို့, တက္ကစီများကပြောင်းလဲမှုကိုဘူတာရုံနှင့် 2.41pm ယူ ပဲရစ်-လိုင်ယွန်ထံမှ TGV Oulx မှ, 7.23pm မှာရောက်ရှိလာ. အဲဒီမှာကနေဖွင့် 15 ဘတ်စ်ကားသို့မဟုတ်တက္ကစီအားဖြင့်မိနစ်.
သငျသညျပြီးသားဖူး သင့်ရဲ့အိတ်ထုပ်ပိုး? ကောင်းသော! ထွက်ခွဲထားခဲ့သည်ခရီး၏အခက်ခဲဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလို့. သင့်ရဲ့ရထား booking မျှသာမိနစ်ကြာလိမ့်မည်, admin ရဲ့အဖိုးအခမပါဘဲ! ဘာအပျော်အပါး! အလည်အပတ် Save A Train ယခုနှင့်တစ်သက်တာသင့်ရဲ့အားလပ်ရက်စာအုပ်ဆိုင်.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုခရက်ဒစ်ပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fski-resorts-visit-train%2F - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)